Vaovao - Ny fampiofanana KF86 dia natao tamim-pahombiazana tao amin'ny faritanin'i Gansu v1
Ny fampiofanana KF86 dia natao tamim-pahombiazana tao amin'ny faritanin'i Gansu v1
Amin'ny maha-mpamatsy fitsapana mpampita vaovao fiarovana lehibe indrindra an'ny SGCC amin'ny taona 2019, KINGSINE dia nomem-boninahitra nasaina hanatrika ny fihaonambe fiofanana izay natolotry ny Gansu Electric Power Training Center (State Grid Corporation of China) any Lanzhou.
Ny fiofanana dia mifantoka indrindra amin'ny fitsipika fiarovana faharoa an'ny substations mahazatra ary ny fanafoanana ireo mpanova, andalana, mpamokatra ary fotodrafitrasa hafa.
Tao anatin'ny fiofanana 7 andro (Oktobra 25-31,2020) izay nandray anjara tamin'ny mpiofana 60 (Mpampiasa ny vokatra KINGSINE avy amin'ny orinasa herinaratra ao an-toerana sy ny toby famokarana herinaratra),
KINGSINE dia nanome lalam-piofanana matetika toy ny etsy ambany:
· Fahalalana fototra
-Mba ny làlan'ny fitsipiky ny fiarovana faharoa
-Fampidirana feno ny Universal Relay Test Set KF86
· Eo an-toerana Fanazaran-tena
-Fitsipika eo an-toerana sy fiasan'ny Universal Relay Test Set KF86
Nandritra ny fampifangaroana ny fahalalana sy ny fampiharana, ny lehiben'ny injenieran'ny KINGSINE dia nanome toky ihany koa fa ny fanontaniana rehetra avy amin'ireo mpiofana dia resahina amin'ny fomba matihanina.
Tamin'ny farany, ny fanehoan-kevitra voaray avy amin'ireo mpandray anjara dia nampiseho fa afa-po tamin'ny fiofanana iray manontolo izy ireo ary niresaka fatratra ny Universal Relay Test Set KF86 satria naneho tsara ny tombony azony amin'ny asa mora sy miasa mahery amin'ny fampiharana.
KINGSINE dia faly manambara fa ny 7 andro KINGSINE Universal Relay Test Set KF86 Training dia mifarana amin'ny mahafa-po ary manantena ny hanome ny serivisinay ho an'ny mpanjifa amin'ny fotoana rehetra izahay.
Fitsapana fampitàna an-tsokosoko, Fitsapana fampitàna lavitra, Fitsapana fampitana mivantana, Fitsapana fampitana niomerika, Fitsapana fampitana, Fiarovana Relay Tester, Vokatra rehetra